သတင်း - ပလပ်စတစ်ဖြီးချည်မျှင်စက်ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်း။
ပလတ်စတစ်စုတ်တံများကို နေ့စဉ်ဘဝတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ပလပ်စတစ်ဖြီးမျှင်စက် အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ပလပ်စတစ်စုတ်တံများအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်သော အမျိုးမျိုးသော ပလပ်စတစ် ချည်မျှင်/ဖိုက်ဘာ ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရန် အဓိကအသုံးပြုသောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်ရေပန်းစားသည်။
ပလပ်စတစ်စုတ်တံများကို အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအမျိုးအစားများ ခွဲခြားထားပါသည်။
1. အိမ်သုံးစုတ်တံများ- အိမ်သာသုံးစုတ်တံ၊ ဖိနပ်စုတ်တံ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့် စုတ်တံ
2. စက်မှုဘရပ်များ- သန့်ရှင်းရေးဘရပ်များ၊ အနုစုတ်တံများ၊ ပွတ်တိုက်စုတ်တံများ၊ ဖုန်မှုန့်ခံစုတ်တံများ၊
3. ခံတွင်း စောင့်ရှောက်မှု- သွားပွတ်တံ
4. တစ်ကိုယ်ရည် စောင့်ရှောက်မှု- လက်သည်းပွတ်တံ၊ မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်၊ အနှိပ်ခံတံ၊ ရေချိုးစုတ်တံ
5. လုပ်ငန်းသုံး သန့်ရှင်းရေး- အဝိုင်းစုတ်တံများ၊ ကားရေဆေးစုတ်တံ
6. ဆေးသုတ်ကိရိယာများ- ဆေးသုတ်စုတ်တံများ၊ ဒလိမ့်တုံးစုတ်တံ
7. အခြားစုတ်တံများ- စုတ်တံများ၊ စုတ်တံများ၊ အထူးစုတ်တံများ
အမျိုးမျိုးသောပလပ်စတစ်စုတ်တံထုတ်ကုန်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစုတ်တံအမျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်များကိုတီထွင်ဖန်တီးခဲ့သည်။ အဓိကပစ္စည်းများမှာ PET၊ PP၊ PBT၊ နိုင်လွန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် SJ65၊ SJ70၊ SJ75၊ SJ80၊ SJ90 စသည်တို့သည် မတူညီသောထုတ်လုပ်မှုပမာဏအတွက် သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် မတူညီသောသတ်မှတ်ချက်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ၊ ကွဲပြားခြားနားသောအချင်း၊ ကွဲပြားခြားနားသောပုံသဏ္ဍာန်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ၏ပလပ်စတစ်ဖြီးအမျှင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ ဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။